दलित जीवन धोस्त पारियो ! — Hamro Sanchar
सुनिल मिजार प्रकाशित : २०७५/१२/२२ गते
आर्थिक, सामाजिक र राजनीति पक्षमा दमन गर्नुका साथै पुजीवादी युगले हतियारको रुपमा प्रयोग गर्यो। दलितलाई आर्थिक पक्षमा हेर्छौ भने श्रमजीवी बर्गको रुपमा पाउछौ। त्यसैगरी सामाजिक पक्षमा हेर्छौ भने मानसम्मान, समाजमा हक, इज्जत प्रतिस्ठान नभएको बर्ग भनेर चिनाइएको छ । त्यस्तै राजनीति पक्षमा हेर्छौ भने सामान्य कार्यकर्ताको रुपमा रहदै आएका छन।
सामन्तवादी युगदेखि अहिलेको पुजीवादी युगसम्म आइपुग्दा दलितको समस्या फेरियो समाधान भएनन्। नेपालमा धेरै नै राजनीति परिवर्तनका आन्दोलन भए । २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ मा झापा आन्दोलन र २०६२/६३ को जन आन्दोलन आदि इत्यादि परिवर्तनको नाममा भएका सबै आन्दोलनहरुमा दलित बर्गलाई उकासेर हकहित र अधिकार प्राप्तिको सपना देखाइ आन्दोलन मात्र नभइ युद्ध मैदानमा समेत लानलाइ उत्प्रेरित गरियो।
दलितकै रगतपसिना, प्राण, आहुतिद्वारा आएको समृद्धिले दलित कै ढाडमा टेकि टाउकामा लात हान्न थाल्यो। आवाजहरुलाइ नजर अन्दाज गर्दै आरक्षण नामक बिर्कोले दलित आवाजलाई बन्द गराइयो । दलित माथीको अन्याय अत्याचारलाई टुलुटुलु हेर्दैबस्यो । योजनाबद्ध दलित बर्गलाई भुत्ते भनाइयो। दलितका हक अधिकार पुस्तकमा मात्र सिमित भए ब्यवहारिक हुन सकेन।
दलित नेतृत्व यहि पुजीवादी संसदिय ब्यवस्थामा सेटिङ हुने तर दलित आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने बिषयमा छलफल र आवश्यक योजना निर्माण नगर्नाले पनि दलित आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको छैन। अहिलेको दलित नेतृत्व धार बिनाको हतियार भएको छ। दलित सब्दद्वारा नै सांसद भन्ने आफ्ना लागि मात्र सोच्ने प्रवृत्ति विरुद्ध खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। दलित दलाल नेतृत्वको गलामा दुइधारे तरवार रेट्ने बेला आएको छ ।
दलितका नाममा च्याउ सरह NGO स्थापना भएको छ । बिभिन्न अभियान सञ्चालन भएका छन । सबै दलित माथी हुने दमन, शोषणका घटनामा बहकिरहेका मात्र देखिन्छ ।
यसरि त मुहान छाडेर धारो सफा गर्न गएको जस्तो भएन र? परिवर्तनको सोचलाइ दमन गर्न सकिन्छ र? आउने ज्वारभाटा रोक्न सकिन्छ र? दलित युवाको मुक्तिको नयाँ मार्गनिर्देशनद्वारा सिङ्गो दलित आन्दोलन ब्युतिने
दलित नाम बाट गरिएको खेती माथि आगो वर्षाइने छ। परिवर्तनको लागि प्राण त्याग गर्न समेत पछि नपर्ने दलित आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि दुइधारे तरबार नबन्ला र?
अबको दलित मुक्ति वर्ग र बलप्रयोगको सिद्धान्त सग जोडिनु आवस्यक छ।
सुनिल मिजार दलित एकता संजाल नेपालका केन्द्रिय सचीव पनि हुन्।